Ukumkela ubabalo beekati, badibene nento elula, efudumeleyo. Kodwa musa ukulibala malunga nezihlunu, ezifihliweyo phantsi kwekhava elikhukhulayo. Ubunzima beentaka ze-Siam sele sele zikwazi ukulimaza idumela lekati njengezilwanyana ezinobumnandi nangothando, kodwa ziphakamisa uluvo lwabo ngenxa yobuchule.
Ngoku uhlanga lwe-Siam luyinto eyaziwayo kakhulu. Baqhwaba imilingo ekhangelekayo yamehlo ahlaza okwesibhakabhaka, umbala wokuqala. Kodwa, ngokusobala, eyazi kakuhle ubunzima beentaka zamaSiya kumaxesha amandulo babizwa ngokuthi "iikati zasebukhosini zaseSiam". Ivela kwinqununu yeSiam - amaYuda, ukuba iikati zivela kumthi wokhokho babo. Izazi zenzululwazi zithi iintaka zaseSiam azizange ziwele i-European breed, ngoko ke zimeli ezicokisekileyo zentshona (ngokubonakalayo iyatshisa), enokuthi ngenxa yezinto zabo ezingaxhamli.
Amakati e-Siam ahlukaniswa ngamahloni, azinzileyo. Kodwa azinakutsho ngoku: "ikati ehamba ngokwayo". Iikhamera ze-Siam zixhomekeke kakhulu kumnini, azikwazi ukuhlala ngaphandle kokunxibelelana kwakhe, ingqalelo. Ngomona wenzondelelo banokuhlaselwa into yokuba nomona, kodwa ezi zigqithiseleyo ...
Musa ukukhupha isilwanyana, ukuphakamisa ithoni yomnikazi - ikati ayiyi kuqonda ukuba ngubani othe tye-ngubani omele uxanduva, kwaye ngokukhawuleza uba ngumkhuseli wesondlo. Kungenxa yokufakela kumntu ukuba ubunjani bezenzo zala makakati, njengezinja, kuthiwa ungumhlobo womntu. Ezinye iikati ziyakwazi ukubhukuda kunye neenja! I-Siam ibekezelela ezinye izilwanyana, kubandakanywa nezinja. Abazange babonise ubundlobongela kuqala, kodwa baya kuphendulela ulwaphulo olufanayo. Kodwa phakathi kwezilwanyana kuya kubotshwa ukulwa nezikhundla eziphambili kunye nengqalelo ekhethekileyo evela kumntu.
Bamele bahlwaywe ngobumnene, baqonde kakuhle xa benetyala. Iikati zale nkcubeko zixhala kakhulu. Xa besaba into ethile, abayilawuleki. Abanye bakholelwa ukuba iintaka zeSiam zibonisa umlingisi wokuzingela. Imfuno iboniswa ngokungabikho kwengqwalasela, kwaye iya kukhangela kuyo yonke into enokwenzeka. Nangona ukhathazekile, ingqalelo kunye nokunyamekela, unokwenzela iSiamese nayiphi na ityala.
Ikati yalo mfuzo idinga ukunxibelelana kwabantu, njengomoya. Emva kokuhlukana kwexesha elide kudinga ukubonakaliswa kwengqalelo kuye impindezelo. Amakati e-Siam adlala kakhulu. Baya kukhanga imikhosi ngokwabo kumdlalo. Uthando lokubambisana nabantwana, ukuthatha inxaxheba kwizicwangciso zabo. Ukuba babetshaya kakubi ikati, akayi kubuyisela, kodwa ahambe. Ubume beekati bubonakaliswa ngothando lwabo lobulungisa: bayakubona ngokugqibeleleyo xa benetyala, kodwa abayi kuxolela ijelo ngaphandle kwecala elicacileyo - baya kukhumbuza ixesha elide kwaye bavumeleke ukuphindisela. Imikhosi inokugxeka inzondo yaseSiamese. Okona kuninzi, ukunyeliswa kweekati zikaSiam kubonakaliswa kwinto yokuba bayishiya umxhaphazi, bafihla kwikhoneni elifihliweyo kwaye balele kwicala.
Ezi ikati zihlakaniphile, ziluhlu, zihlakaniphile. Ukuba ufundiswe kakuhle, ikati ayiyi kukhwela ngokwasemthethweni kwitheyibhile yokutya eseleyo: iya kubongoza, ihlabe, ihamba ngeenxa zonke kwiibhola, kodwa ayiyi kunyuka "ukuba" (nangona uvavanyo alukwazi ukumelana nenyama).
Ukunikezelwa kwamakhono engqondo, uhlobo lweentaka zaseSiamese lukhuni kwaye lukhuni. Abantu baseSiam banomdla kakhulu, ngoko ke, de bahlolisise yonke imimandla yendlu, abayi kuphumla. Abayithandi ukuthobela i-master's whims, kodwa ngokusebenzisa umdlalo banokuqeqeshwa kalula: banokufunda indlela yokuzisa izinto, ukuxhuma phezu kwemiqobo, banike i-paws.
Nangona bahlukeneyo, abantu ngabanye, ezi zizilwanyana eziqhayisa. Kuphawulwa ukuba bayabathanda ukuba babekho kwinkampani, ekuboneni. Ukuze abahlobo basuke benqabile ngamadolo. Kodwa bayaqaphela abantu abangaziwayo, nangona bakhawuleza bajwayele ubuso obutsha.
Amakati e-Siam azivala kwimoya yomphathi. Xa edabuka, ikati iya kuhlambuluka ngokukhawuleza emadolweni, kwaye xa eva ukukhala, "uya kugubha", njengokungathi uyabelana neengxakini zakhe. Ukulala, ngokuqinisekileyo, ulala nomnini, ebusuku ubangela indlela yokuphila, kuba ebumnyameni bubona bubi ngaphezu kwezinye iintlobo. Ngomonde ulinde de kube umgcini wesondlo avuke - kwaye kuphela uqala ukuthetha, purr. Ngokuqhelekileyo, la maakati athetha kakhulu, adibe kakhulu.
Nangona ezinye "iintsholongwane" (ama-felinologists) zithetha ukuba izinto ezintle ezinjenge-rancor, ulaka, ubunzima ekukhulumisananeni nabantwana abancinci zivela kwintlobo esondeleyo kunye namanqaku afanayo kunye namathambo aseThai. Abanye ngelo xesha bathetha ukuba unobumba obugqithisileyo beentaka ze-Siam zezinwele ezimfutshane (i-Ballinesian).
Kwimeko nayiphi na into, ukuba ungumguli, umninimzi onakekelayo, ikati iya kukubamba ngothando, ivuselele isohlwayo, ukuxhalaba kunye nokonwaba kunye nokunyamekela kwabo kuya kufumana intsingiselo efanelekileyo.
Indlela yokufundisa ikati ukuba idle ngokufanelekileyo
I-Cod ebhakawa ngamacube kunye anyanisi: iresiphi evela kumculi waseJasmine ngenani lomfanekiso
Isobho seenkomo zaseShayina kunye nama-noodle
Iimpawu ezikhethekileyo zokukhula kweengcambu ze roses
Yintoni kufuneka umntwana akwazi ukuyenza ngonyaka ongu-1?
I-Pizza kunye nepey and Gorgonzola ushizi
Iipilisi ezisuka kugulo lokuhamba
Ukuphulukiswa kunye neempawu zomlingo ze-emerald
Ukuhlambalaza umntwana ukuya kumnyaka o-1
Indlela yokufundisa umntwana ukuba abize itekisi P
Ukuphuhliswa kwengane kuze kube unyaka
Yintoni uthando phakathi kwendoda nomfazi